कसरी हुन्छ व्रेनट्युमर ? यसबाट कसरी बच्ने ? SULSULE:A Truly Nepali News Portal
सामान्यतया टाउको हामी सवैलाई दुख्ने गर्छ । कहिले धेरै मानसिक थकाइले पनि टाउको दुख्ने गर्दछ । यस्तै आँखा कमजोर भएमा पनि टाउको दुख्ने गर्छ । धेरै ज्वरो आउँदा पनि टाउको दुख्ने गर्दछ । तर धेरै एकोहोरो टाउको दुख्यो भने व्रेन ट्युमरका कारणले पनि टाउको दुखेको हुनसक्छ ।
धेरै टाउको दुखेको र औसधी खाँदा पनि निको भएन भने सर्तक रहनु पर्ने हुन्छ । कीनकी त्यस्तो अवस्थामा व्रेनट्युमरको संकेत पनि हुन सक्छ । सामान्यतया, ब्रेन ट्यूमर तब हुन्छ, जब मस्तिष्कको कोशिका असामान्य रुपमा बढ्न थाल्छ । कतिलाई ब्रेन ट्यूमर आणुवंशिक पनि हुनसक्छ । कयौ पटक विकिरण तथा हानीकारण रसायनको सम्पर्कमा आउनाले पनि ब्रेन ट्यूमर हुनसक्छ ।
यस्तो अवस्थामा नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा गएर स्वास्थ्य जाँच गराइहाल्नु पर्ने हुन्छ । कीनकी व्रन ट्युमरले मानिसको ज्यान पनि लान सक्छ । तर वेलैमा होसियार भएर स्वास्थ्य जाँच गराइ यसको उपचार गरेमा निको पनि हुनसक्छ ।
त्यसैले हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई खेलवाड नगरी वेलैमा रोगको पहिचान र तयसको निदान गर्न पट्टि लाग्यौं भने अवस्य पनि व्रेन ट्युमरसँग डराउनु पर्दैन । यो उपचार पछि निको हुन्छ तर हामीले लापरवाही गयौ भने हाम्रो ज्यान पनि जान सक्छ । त्यसैले आफ्नो स्वाथ्यको वेलैमा पहिचान र समाधान गर्ने गरौं ।